SIDA LOO FAAFIYO BUCKTHORN BADDA: GOOYN, SUCKERS XIDIDKA, ABUUR IYO LAYERING - SOOSAARKA DALAGGA
Baalshiinka badda: sirta ah ee dhalmada
Bustada badda waa mid qaali ah oo aan lagama maarmaan ah ee guriga. Qof kastaa wuu ogyahay waxtarkiisa, miyuusigga, isticmaalka cunto karinta, iyo sidoo kale daawada, cosmetology. Bannaanka u badan ayaa la kulmay su'aasha ah dhalashada ee this geed. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu xallinayo dhibaatadan: buckthorn badda waxaa lagu faafiyaa by abuur, grafting, suckers xidid, laamaha iyo qaybinta baadiyaha. Maqaalka waxaan eegeynaa hab kasta oo faahfaahin dheeraad ah, waxaadna dooran kartaa naftaada saxda ah.
Tani maaha qaab caan ah oo caan u ah, maadaama ay qaadanayso waqti dheer, waxaana badanaa suurtagal ah in la saadaaliyo taas oo buckthorn badda aad ka heli doonto abuurka beeray. Waxaa jira khatar ah in berry uu kori doono yar, iyo laamaha gebi ahaanba waxaa lagu dabooli doonaa marinnada. Laakiin qaar ka mid ah, tani waa jidka kaliya, markaa ka fikir.
Seeds waxaa laga helaa berry bisil. Si arrintan loo sameeyo, waxay u burburiyaan, khalkhalsan iyada oo shaandho, taas oo xor ka ah abuurka laga sameeyo saxarka. Ku dhaq oo qallalan miraha la dhammeeyey. Waxaad ku kaydi kartaa bac warqad ah ilaa saddex sano.
Ka hor inta beero, miraha waxaa badanaa lagu qooyay biyo kulul saddex maalmood. Ka dib markaa waa la miiray, maalinta shanaadna waxay dillaacayaan. Waxaad sidoo kale isku qasin kartaa abuurka leh ciid qoyan iyo meel qaboojiyaha ilaa illaa bil. Iyadoo marka ugu horeysa ee lagu beeri karo waa la beeray.
Waxaa xiiso leh in laga akhriyo noocyada ugu caansan ee buckthorn badda.
Bannaanka miraha buckthorn badda waxaa lagu beeray guga (haddii aad haysato abuur qalalan, dhirta dayrta). Si arrintan loo sameeyo, waxay hoos u dhacaan dhulka 3 cm, meel fog oo ah 2 cm midba midka kale. Top ayaa daboolay humus iyo ciid. Sariiraha waa inay ahaataa meel fog oo ah nus mitir midba midka kale.
Laba ama saddex bilood ee sariiraha u baahan yahay in la waraabiyo si aad u badan (gaar ahaan cimilada qalalan), iyo, haddii muddada this aad u aragto geedo, waxaa loola jeedaa in wax kasta kuugu soo baxay, adiga oo abuur ah "shaqeeyay".
Waa muhiim! Saaxiibo badani kuma talin karaan beerashada miraha xilliga dayrta! Jeexista xaaladaha noocaas ah waa 10-15%. Tani ma aha sabab u ah mustaqbalka muddada dheer ee abuurka abuuray. Waqtiga guud ee la aqoonsan yahay ee lagu beerayo baalal-badeedka badda waa guga.
Qaabka kale ee taranta - waa gooyn buckthorn badda. Waxa loo doortaa naftiisa bannaanka u badan. Waxaa jira laba ikhtiyaar: isticmaalka guntooda lignified ama cagaaran. Labada ikhtiyaar ayaa noqon doona mid waxtar leh haddii aad raacdo tiknoolajiyad sahlan.
Bishii Nofeembar - Diseembar, gooyo dhallinyarada (da'da hal sano ama laba sano), caleemo adag oo caafimaad leh oo ka soo baxa baadiyaha buckthorn. Ku duub wargeyska ama maro oo u dhaaf si aad u "hibernate" ku qaboojiyaha ama qolka hoose. Guga hore, ka gooyaa iyaga oo gooynaya 20 cm dheer, aan ka badnayn nus nus centimetre ballaaran.
Dhammaadka dhinacyada gooynta waa in lagu meeleeyaa biyaha ama kobcinta kobcinta kicinta muddo toddobaad ah, ka dib marka ay burooyinkeeda iyo burooyinkeeda ay ka muuqdaan iyaga. Gooyn lagu beeray sariiraha si ay dhowr nabruhu ugu koraan. Ka dib markii in, ciidda waa rammed, rusheeyey leh peat iyo waraabiyo badan. Guga xiga, geedo ayaa diyaar u ah inay ku tallaalaan.
Under diyaarinta gooyn cagaaran dooro xilli diiran - xagaaga, doorbidayaa dhamaadka Juun. Sidaa darted, gooynta 10cm dhererka ah waxaa lagu diyaariyaa xoog xoog leh, caafimaad leh, wax yar oo lignified ah (cagaar la'aan) caleemaha Ka saar caleemaha hoose kana dhig dhammaadka biyaha ama xalka dareeraha koritaanka dhowr maalmood.
Gooynka cagaarka ayaa sidoo kale ku dhufan kara gooseberries, plomme, canab, cotoneaster, chokeberry, baraf, honeysuckle capricoleum.
Ka dib markii in, iyaga lagu beeray perekopannaya, bacrimiyey leh peat, isku qasan ciid, oo badan oo waraabiyo, 6 cm ka fog. Saliidaada ayaa dhulka ku tuuji.
Badanaa inta badan, loosen, quudiyo dhulka. Bil kasta ka dib, gooyn ayaa loo bari karaa deegaanka dibadda. Ka saar filimka saacado yar, hawo, iyaga oo diidaya. Marka laga hadlayo "aqalka dhirta lagu koriyo" waxaa suurtagal ah in la diido. Ka hor inta bilawga ah cimilada qabow, diirimaadka guntooda leh dhadday iyo caleemo ilaa guga. Guga waxaa lagu wareeri karaa.
Ma taqaanaa? Baalalka badda ma aha magaca kaliya ee geedkan. Degaannada kala duwan waxaa loogu yeeraa si kala duwan: ivotorn, wolfberry, alwaax.
Sida loo faafiyo suckers xidid buckthorn badda
Habkani waa la tixgeliyaa mid ka mid ah ugu fudud. Waxay u baahan doontaa geed duurjoog ah ilaa shan sano jir. Da'daan da'daas, dhirta ayaa u muuqda inay u baxdo. Xilliga guga, qaado jiilka xididka geedka, ku dhaji dhulka iyo muddaba biyo. Horeba xilliga dayrta ee xididdadu waxay horumarin doonaan dhulka, waana waqtigii lagu beeri lahaa geedka.
Haddii aad go'aansato inaad ku korto baaluga badda, waxay kugu fiicnaan doontaa inaad ka barato cudurrada iyo cayayaanka loo baahan yahay in la ilaaliyo.
Hab kale oo sahlan oo loo jiido buckthorn badda. Waxay u baahan tahay baadiyaha yar yar leh oo laamo caafimaad leh oo caafimaad leh. Waxay ku qariyeen dhulka ku hareereysan, biyo, bacrimiya - u diyaargaroobidda. Taas ka dib, laamaha hoose ayaa loo dhigaa dhulka, ka soo baxa meelo dhowr ah oo badan oo waraabiyo. Muddo ka dib, laamuhu waxay u muuqdaan kuwo u baxsan, waxay googooyeen oo ay helaan geedo.
Ma taqaanaa? Marka loo eego xaaladaha dabiiciga ah ee 7 dheddig haween ah, waxaa jira 3 rag ah. Tani waa in la tixgeliyaa markaad beerto geedo, haddii aad rabto in aad haysato dalag tayo wanaagsan oo miro ah.
Sida loo koro buckthorn badda adoo qaybinaya baadiyaha
Haddii aad go'aansatid in aad beerista baadiyahaaga kudeeqdo meel cusub, waxaad fursad u haysataa inaadan mid ka mid aheyn, laakiin dhowr kalluunka markiiba. Si arrintan loo sameeyo, isagoo qoryo abuuray oo xididdadiisa ka soo jiidaya dhul xad-dhaaf ah, waxaa loo qaybiyaa qaybo iyadoo la isticmaalayo shilin.
Waxaad u baahan tahay inaad taxadarto oo aadan dhaawac u geysanayn xididada si aad u hubiso in baadiyaha cusubi ay leedahay qayb caafimaad oo gaar ah oo ka mid ah nidaamka xididka. Ka dib, in ay duurka u yihiin beeray dhulka bacrimiyey, si ballaaran u waraabiyey. Waxaa haboon in la sameeyo habraacan bisha March ama November.
Waa muhiim! Haddii aad aad u badan tahay markaad ka saarto xididdada hore, caleemaha waa in sidoo kale la gaabiyaa. Way ka fiican tahay inaad ka baxdo xayawaan aad u gaaban marka loo eego qayb ka sareeya dhulka kor ku xusan oo leh xidid yar.
Halkaan waxaa ah dhammaan hababka ugu caamsan ee bakeerada badda. Dhamaantood waxay u baahan yihiin xoogaa yar iyo waqti yar. Laakiin waqti isku mid ah waa shaqo fiican oo faa'iido leh. Xilli sahlan iyo goosashada wanaagsan!